केही घण्टापछि धरहरा चढ्ने सपना ढलेको त्यो दिन
तीन वर्षअघि सुन्धारामा रहेको ९ तले धरहरा ढलेको दिन आज । त्यो भन्दा पनि नेपालमा विनासकारी भूकम्प आएको दिन । जस्ताले बारेर धरहराको भग्नावशेषलाई संरक्षण दिइएको छ । धरहरा ढलेको तीन वर्ष भइसके पनि मानिसहरू धरहराको समिपमा पुग्न छाडेका छैनन् ।
म पनि जब सुन्धारमा भत्किएर रहेको धरहरालाई नियाल्छु, तब स्मरण गर्छु, भूकम्प गएको कहाली लाग्दो त्यो दिन, अनि धरहरा चढ्ने मेरो योजना भूकम्पले ढालेको त्यो दिन ।
क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लुडब्लुजे)ले काठमाडौंको बबरमहलमा रहेको सापफल्चा होटलमा महिला पत्रकारका लागि तालिमको आयोजना गरेको थियो । सोही तालिममा सहभागी हुन म धादिङबाट आएको थिएँ । मजस्तै काठमाडौंसहित अन्य २५ जिल्लाका महिला पत्रकारहरू तालिममा सहभागी भएका थिए ।
वैशाख ८ गतेबाट शुरु भएको ५ दिने तालिमको अन्तिम दिन थियो, वैशाख १२ गते । तालिमको अन्तिम घडीमा पुगेका थियौं । तालिमका प्रशिक्षक रामकृष्ण रेग्मीले पत्रकारमा हुनुपर्ने गुण र पत्रकार आचारसंहिताको विषयमा प्रशिक्षण दिइरहनु भएको थियो । आयोजक डब्लुडब्लुजेका दिदीहरू १२ बजे तालिम समापन गर्ने तयारी गर्दै थिए । विभिन्न जिल्लाका भए पनि ४ दिनसम्म एकै ठाउँमा बस्दा सबैसँग सामिप्यता बढिसकेको थियो । तालिम सकिए पनि त्यो दिन सापफल्चामै बस्ने व्यवस्था थियो । त्यसैले तालिम सकिएपछि खाना खाएर धरहरा जाने योजना थियो हाम्रो ।
रामकृष्ण सरले दिनुभएको तालिम निकै सान्दर्भिक र रमाइलो पनि थियो । अन्तिम समयमा पनि हामी उहाँको कुरा ध्यानमग्न भएर सुनिरहेका थियौं ।
सापफल्चाको तालिम हलमा रामकृष्ण सरको मात्रै आवज आइरहेको थियो । रामकृष्ण सरले बोलिरहनुभएकै समयमा अर्को अनौठो आवज थपियो, हामी बसिरहेको कुर्ची, अगाडिको टेबल हल्लिन थाल्यो । किन हल्लियो भन्ने दिमागले सोच्न पनि नभ्याउँदै ठूलो आवजमा बेजोडले हामी बसेको घर नै हल्लियो ।
‘सबै टेबलमुनि बसौं’ भूकम्प आयो,’ रामकृष्ण सर चिच्याएर बोल्नुभयो, ‘टेबलमुनि बसौं ! टेबलमुनि !
रामकृष्ण सरको आदेशलाई पालना गर्दै हामी टेबलमुनि छिर्‍यौं । तालिम हल मज्जाले हल्लिरहेको थियो ।
वि.सं. १९९० सालमा ठूलो भूकम्प आएको सुनेको थिएँ । कहिलेकाहीँ सानातिना भूकम्प आउँदा बुबाले थाहा पाउनुहुँदो रहेछ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, ‘आज भूकम्प आयो ।’ म सोध्थेँ, ‘बुबा कसरी आउँछ भूकम्प ?’ सानोमा बुबालाई गरेको प्रश्न अहिले पनि याद गर्छु । ‘जमिन हल्लिन्छ ।’ बुबाको यो जवाफपछि मनले अनेक प्रश्नहरू जन्माउथ्यो ।
‘कसरी आउँछ होला भूकम्प ? किन हल्लाउछ होला जमिन’ मनमनै आफैसँग बहस गर्थें । जहिले पनि राति मात्रै किन आएको होला ? बुबाले चाहीँ थाहा पाउने मैले किन थाहा नपाएको होला । म निदाएको बेलामा मात्रै आउन पर्ने भूकम्पलाई पनि !’ मेरो कलिलो दिमागले भूकम्पसँग मनमनै गुनासो गर्थ्यो ।
ओहो ! भूकम्प त यस्तरी पो आउने रहेछ । बच्चा बेलामा आभास गर्न नपाएको भूकम्पलाई त्यतिबेला महसुस गर्दै थिएँ । बुबाले सानोमा भूकम्प आउँदा जमिन हल्लिन्छ भन्नुभएको थियो । कसरी हल्लिँदै छ भनेर टेबलमुनिबाट टाउको बाहिर निकालेर हेरेँ । हामी दुईतला माथि थियौं । जस्ताको छानो थियो, तालिम हलको । जस्ता पनि भूकम्पसँगै नाचिरहेको थियो । सिलिङ फ्यान हल्लिँदा–हल्लिँदा झर्न लागिसकेको थियो । हामी माथि यो टेबल पनि हल्लिने प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो ।
मैले टेबलमुनि छिरेरसँगै रहेका साथीहरूलाई हेरेँ । केही साथीहरू म जस्तैगरी भूकम्पको गतिविधिलाई नियाल्दै थिए । निरन्तर अनौठो लाग्ने आवजमा जमिन यताउता गरेर हल्लिन थालेपछि केही साथीहरू रुन शुरु गरिसकेका थिए । भूकम्पमा बजिरहेका टेबल, फ्यान र अन्य सामानसँगै साथीहरूको आवज पनि मिसिन थाल्यो ।
अघिसम्म भूकम्पको आभासमा रमाइरहेको मनमा कताकता डर पस्न थाल्यो । भूकम्पको कम्पनसँगै मनको धडकन पनि बढेको थियो । भूकम्पको कम्पन्न विस्तारै कम हुँदै गयो । हामी सबैजना तालिमहलको बाहिर निस्कियौँ । होटलको आँगनमा अरु धेरै जना उभिएका थिए । हामी पनि त्यहीँ उभियौं । मोवालाइमा नेटवर्क थिएन । होटलवालाले ठूलो स्वरमा रेडियो नेपाल बजाए । हामी होटलको आँगनमा उभिएर रेडियो सुन्न थाल्यौं ।
आयो ! आयो ! फेरि आयो । जमिन हल्लिन थालेपछि सबै चिच्याउन थाले । डरले सबैको अनुहार कालोनिलो भएको थियो । केही साथीहरू रुँदै थिए ।
एकैछिनमा रेडियो नेपालले फुकिहाल्यो, सुन्धाराको धरधरा ढल्यो, अरु थुपै्र मन्दिरहरू भत्किएका छन् । नेपालमा ठूलो भूकम्प आयो भन्ने हल्लाखल्ला शुरु भयो । काठमाडौं ध्वस्त भएको छ । गाउँघरमा पनि केही बाँकी छैन भन्ने हल्लाखल्ला शुरु भयो । आकाशमा हेलिकप्टर उड्न थालेको थियो । जमिन बेलाबेलामा हल्लिँदै थियो ।
हल्लाखल्लाकै बीच कसैले सुनाए, भूकम्पको केन्द्रबिन्दु धादिङ हो अरे, धादिङमा सबै ध्वस्त भएको छ रे ! मन झसङ्ग भयो ।
घर सम्झिएँ । बुबा, दिदी, भाइ अनि अरु आफन्तहरू कहाँ होलान् ? कतै केही त भएन मन निकै डरार्‍यो । होटलमा रहेको दुईवटा फोन चलेको थियो । तर रुने साथीहरूको पहिला पालो थियो । बल्लतल्ल पालो आयो, तर घरमा फोन लागेन ।
पोखरामा हुनुभएको दाइलाई फोन गरेँ । पोखरमा केही नभएको तर घरमा फोन लागेन भन्ने सुनाउनुभयो दाइले । घरमा के भयो भन्ने मात्रै चिन्ता लाग्यो । बेलुकामा बल्लतल्त फोन लाग्यो ।
बुबाले मलिन आवजमा घर भूकम्पले भत्किएर गाउँका सबैजना खेतमा एकैठाउँमा रहेको बताउनुभयो । बुबाको मलिन आवजले मेरो आँखा रसायो । सबैजना सुरक्षित रहेको खबरमा खुशी हुँदै बुबालाई सम्झाएर भोलिबिहानै घर फर्किने बताउँदै फोन राखेँ । सानोमा बुबाले भन्नुभएको भूकम्प र यो भूकम्पमा धेरै फरक थियो । मैले कल्पना गरेकी थिइनँ ।
धरहरा चढ्ने योजना तुहियो
धरहराको निर्माण वि.सं. १८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले गर्न लगाएका थिए भन्ने पढेको थिएँ । त्यतिबेला भीमसेन थापाले सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना र जानकारी दिन तथा भेला गराउन पहिले धरहराको टुप्पोबाट बिगुल बजाउन धरहरा बनाएका थिए रे ! वि.सं. १९९० भन्दा पहिला यसमा ११ तला थियो ।
यसको बार्दली नवौं तलमा रहेको थियो, तर १९९० माघ २ मा आएको भुकम्पले भत्काएर ९ तल्लाको बनेको थियो । काठमाडौंमै बस्नेहरूका लागि धरहरा चढ्नु सामान्य कुरा थियो । तर मैले धरहरको इतिहास मात्रै पढेको थिएँ । धरहरालाई नजिक पुगेर हेरेको र धरहराको सिँडीहरू चढेको थिइनँ । तालिम सकिएपछि धरहरा चढ्ने सपना अधुरै रह्यो । वैशाख १२ गते विहान ११ः ५६ मा आएको भूकम्पले धरहरा ढालिदियो ।
ढलेकै धरहरा र भूकम्पपछिको काठमाडौं हेर्न हामी होटलबाट निस्कियौं । काठमाडौंको वातावरण उराठलाग्दो थियो । टुँडीखेलको चौरमा मानिसहरू ज्यान जोगाउन बसेका थिए । धरहरा परिसरमा हामी पुग्दा धरहरा हेर्न पुगेका मानिसको भीड सम्हाल्न सुरक्षाकर्मीलाई निकै सकस परेको देखिन्थ्यो ।
त्यो दिन धरहरा चढ्ने योजना थियो, तर हाम्रो योजनालाई भूकम्पले असफल बनायो । धरहरा ढल्दा धरहरामा चढेका धेरैको ज्यान गयो । मन झस्कियो, हामी धरहरामा भएको समयमा भूकम्प गएको भए हामी पनि बाँच्ने थिएनौँ ।
मानिसको निकै भिडभाड थियो । भत्किएको धरहरा पनि हेर्न पनि सक्ने अवस्था थिएन । डर र त्रासले थाकेको मन र शरीर सिथिल बन्दै गएको थियो । त्यसैले हामी बबरबहल फर्कियौँ । भूकम्पको कम्पन र मनको त्रास रोकिएको थिएन । भूकम्प गएको रात होटलको आँगनमा बसेरै बितायौँ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्पले ढालेको धरहरा अहिलेसम्म उठेको छैन । भत्किएर बसेको धरहरालाई जस्ताको बारभित्र संरक्षण दिएर राखिएको छ । ढलेकै धरहराको परिसरमा पुगेर अहिले पनि मानिसहरू धरहराप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गरिरहेका हुन्छन् ।
बैशाख १२, २०७५ मा प्रकाशित